Maamulka Gobolka Hiiraan oo digniin udiray dadka umaxkamad doonta Al-Shabaab. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAMaamulka Gobolka Hiiraan oo digniin udiray dadka umaxkamad doonta Al-Shabaab.
Maamulka Gobolka Hiiraan oo digniin udiray dadka umaxkamad doonta Al-Shabaab.
Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa soo saaray digniino ku adan dadka umaxkaamd doonta deegaanada Al-Shabaab ay ka joogaan Gobolka Hiiraan.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Hiiraan Maxamed Nuur Dabaashe ayaa sheegay iney talaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadayaan dadka taga deegaanada Shabaab ay ka joogaan Hiiraan, si ay ugu soo xukumaan arimaha dhulalka iyo sidoo kale dacwadaha kale ee dilalka la xiriira.
Waxa uu Afhayeen Maxamed Nuur Dabaashe sheegay in dadka lagu soo dacweeyo Shabaab, wixii soo gaara ay masuuliyadooda qaadayaan dadka soo eedeeyaa oo aan laga aamuseenin arimahaas.
Waxa uu soo qaatay Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Hiiraan oo uu sheegay iney ku hanjabeen iney umaxkamad doonanayaan Al-Shabaab, arinkaas ayuu ku tilmaamay iney tahay mid masiibo ah oo aan loo baahneyn xiligan.
Digniin taa la mid ah waxaa horay usoo saaray Taliyaha Nabad Sugida Gobolka Sh.Dhexe oo sheegay iney la xisaabtamayaan dadka aada deegaanada Shabaab, si ay maxkamado uga soo helaan.
Somaliland oo ka hadashay Xariga Agaasimaha Tvga Universal ee Somaliland
Shir ku saabsan dagaal ka dhanka ah Al-Shabaab oo Kismaayo ka furmayo.
43,893 total views, 843 views today
43,893 total views, 843 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
43,965 total views, 843 views today
43,965 total views, 843 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
43,979 total views, 843 views today
43,979 total views, 843 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
44,001 total views, 843 views today
44,001 total views, 843 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
44,036 total views, 845 views today
44,036 total views, 845 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]